महासचिव नछोड्ने भएपछि प्रचण्डले खोलिदिए महराको पोल, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
महासचिव नछोड्ने भएपछि प्रचण्डले खोलिदिए महराको पोल, के हो यथार्थ ?
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन जारी छ। महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन हुनेछ। पार्टीको शिर्ष पद अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निविकल्प भएपनि अन्य पदमा रस्साकस्सी चलेको छ।
उपाध्यक्षमा पनि कुरा मिल्ने ठाउँ भएपनि महासचिवमा आधा दर्जन बढि नेताहरुले दावि गरेका छन्। त्यसमध्येका एक हुने पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा।
प्रचण्डले उपाध्यक्ष बस्न गरेको आग्रहलाई उनले नमाने पछि प्रचण्डले अर्को आईडिया निकालेर महरालाई व्याग गराउने प्रयास गरेका छन्।पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका महरा पछिल्लो समय एमसीसी विरोधीको रुपमा देखा परेका छन्।
तर उनै महराको १४ बर्ष पुरानो पोल प्रचण्ड निकटका नेताहरुले खोलेपछि पार्टीमा नाक देखाउन मुस्किल भएको छ। आफूले एमसीसी टेबुल नगरेकै कारण सभामुख रहँदा षड्यन्त्र गरिएकोसम्म महराले भनिसकेको छन्।
जबकी तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा भूमिका खेलेका थिए। उनै महराले अमेरिकानै पुगेर एमसीसीको फाइनल ड्राफ्ट ओके गरेका थिए।
त्यत्ति मात्रै होइन उनको अर्को कुरा पनि खुलासा भएको छ। तत्कालिन बिद्रोही माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आइसके पछि पनि अमेरिकाले माओबादीलाई राजनीतिक शक्ति मानेको थिएन।
अनि अमेरिकाले माओवादीलाई राजनितीक शक्तिको मान्यता दिन नमाने पछि महरालेनै हस्ताक्षर गरेर माओवादीको लेटरहेडमा १४ बर्ष अघि अमेरिकाले भनेका सर्तहरु मान्न तयार छौँ भनेर अमेरिकी दुतावासमा निवेदन हालेका थिए।
जनयुद्ध अवधिभर भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्वाद मुर्दावाद भनेर माहोल बनाए पनि माओवादीका शिर्ष नेताहरु इण्डीयामै बसेर नेपालमा जनयुद्ध चलाएको त प्रमाणित नै भइसकेको छ।
अमेरिकासँग पनि उसले भनेका सर्तहरु मान्न तयार छौ भनेर महरालेनै हस्तारक्षर गरेर नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासमा निवेदन हालिएको तथ्य बाहिर आएपछि माओवादीको झन धेरै आलोचना हुनेछ।
विद्रोहबाट माओवादी शन्ति प्रक्रियामा आइसके पछि माओवादीलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तीसँग सम्बन्ध स्थापित गराउँन प्रमुख भूमिका खेलेका डा. केवि रोकायाले यस विषयमा विस्तृत खुलासा गरेका छन्।
माओवादीले अमेरिकासँग लिखित हस्ताक्षर सहित निवेदन दिँदाका साक्षी मात्रै होइन संलग्नकर्ता रोकायाको खुलासाले ठूलो तरंग जाने अवस्था आएको छ। अमेरिकासँग माओवादीको सम्बन्ध आफूलेनै स्थापित गराएको दाबी गर्दै आएका थिए।
रोकायाले माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आइसके पछि पनि उनीहरुलाई आ’तं’का’री कै व्यवहार अमेरिकाले गर्ने गरेको र धैरै मेहनत गरेपछि मात्रै माओवादीलाई राजनीतिक शक्ति मान्न अमेरिका तयार भएको रोकायाले भनेका छन्।
तेस्तै, माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ। आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आठौं दिनमा कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्थायी समितिको बैठक बसेको हो।
आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन्। एक नेताका अनुसार प्रदेश र प्रवासबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा आकांक्षी केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम पनि आजकै स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।
माओवादीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले नेतृत्व छनोट गर्न शनिबार नै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। जसअनुसार झन्डै साढे १७ सय मतदाता नामावली प्रकाशित भइसकेको छ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि भन्दै आज दिउँसो २ बजेसम्म बन्दसत्र स्थगित गरिएको छ। स्थायी समितिबाट पास भएका १५ पदाधिकारीसहित दुई सय ९९ केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहनेको नाम प्रचण्डले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।